[Western Morning Homestay] ins blogger yaseKorea enohlobo olufanayo lwe-cream hut HD ingqikelelo yegumbi elikhulu lokulala kwigumbi elisezantsi kumnyango ongaphantsi kwendlela yeYunivesithi yaseGuangxi, kufutshane neNongyuan Road Zoo Railway Station. - I-Airbnb
[Western Morning Homestay] ins blogger yaseKorea enohlobo olufanayo lwe-cream hut HD ingqikelelo yegumbi elikhulu lokulala kwigumbi elisezantsi kumnyango ongaphantsi kwendlela yeYunivesithi yaseGuangxi, kufutshane neNongyuan Road Zoo Railway Station.
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe ongu西早
Indlu yintsha kakhulu, kwaye ukulungiswa kwagqitywa ekuqaleni konyaka
Uninzi lwefenitshala kunye nemihombiso
Umninimzi, u-Miss Xizao, owayefunde eKorea, wenza i-DIY ngesandla
Iimbombo zonke zintle
Vumela ukuba uhlale kwikhaya le-blogger yaseKorea
Umnikazi uXi uhlala kufutshane. Ukuba kukho nayiphi na ingxaki enokusonjululwa, iya kubonakala malunga nemizuzu eyi-10. Njengomntu otyayo ogcweleyo, uXi Zao uyavuya ukwabelana nawe ngeendawo zokutyela ezingeyondlongondlongo ezinokuthi abantu balapha baseNanning baya xhasa.
Uyilo lwesitayile sendlu yonke uMiss Xizao, owakha wafunda eMzantsi Korea, wazenzela ngokwakhe ikhrimu efanayo yeebhlogi zaseKorea! Iitafile zekhofi, iindawo zomlilo, iitafile zokutya, imizobo, iitafile zebhedi, ii-arches, njl. Zonke zenziwe ngumnini ngokwakhe, kwaye zonke iikona zithandwa kakhulu!
Lo mhlaba ujongene ngqo neYunivesithi yaseGuangxi, ngaphaya kwendlela
Ezantsi kuPhuma kwiYunivesithi yaseGuangxi kwiSikhululo sikaloliwe esingaphantsi komhlaba
Ibekwe kwisithili soshishino esinempumelelo entshona
Kukho ivenkile eluncedo ezantsi, kwaye kukho iStarbucks/KFC/Hi Tea/Cinema eNanning Department Store ejongene nayo.
Luhambo lwemizuzu elishumi kuphela ukuya kwi-Huoju Road Nongyuan Road Food Street okanye kwisitrato esisanda kuthandwa sokutya i-Dongkai International Plaza.
Iindlela ezimbini ezihamba ngaphantsi komhlaba zimisa ngqo kwisikhululo sikaloliwe
Izikhululo ezithathu zikaloliwe ohamba ngaphantsi komhlaba ngokuthe ngqo kwisitalato sesithathu kunye neendledlana ezimbini zeChaoyang Square kumbindi wesixeko
Kuthatha kuphela malunga ne-20mins ukuthatha indlela engaphantsi komhlaba ukuya kwisiXeko saseHangyang / isiXeko saseVientiane / iMinzu Plaza
Isikhululo sokugqibela sisiKhululo sikaloliwe saseMpuma
Kulula ukuya kuyo yonke indawo
Umbuki zindwendwe ngu- 西早
Ukulandwa simahla kunye nokwehla kwisikhululo sikaloliwe (isikhululo esingasempuma)
Ukubonelela ngemoto yesikhululo seenqwelomoya/inkonzo yokurentisa ngetram
Ukubonelela ngetafile kunye ne-induction cooker yesikhenkcisi se-microwave
Ngezizathu zokhuseleko, akukho sinongo sinikwayo. Nceda uqonde
Ukuba ufuna naluphi na uncedo ngexesha lokuhlala kwakho
Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana ne-West Morning
UXi Morning uhlala kufutshane kwaye uza kufika malunga nemizuzu elishumi
Ukuba ungumntu omtsha eNanning
I-Xizao iyakuvuyela ukwabelana nawe ngeendawo zokutyela ezithandwayo abantu basekuhlaleni abathanda ukuzindwendwela